Mooge Nin Maayarnimada Kaga Haboon Ma Jiro Faratoon Nin Guddooninimada Kaga Haboon Ma Jiro
Wednesday June 09, 2021 - 10:35:22 in Articles by Hadhwanaag News
31 may waxa inoo qabsoomay doorosho xor iyo xallaala,oon abid carrada soo Marin, taas oo noqoto taariikh uu nasiib u hellay madaxweyne nasiib leh,halgamaa umadeed waddani daacada ee mujaahid madaxweyne muse. Haa
Waxa qorantay taariikh dhamaan waxa ay isku soo dhawaysay qaluubta somaliland taa oo ku abuurtay maxabo iyo galgacal.
Mooge waxa uu ka mid noqday dadka nasiibka u hellay kasbada qaluubta dadweynaha reer hargaysa oo dhan way soo saareen Daan ilaa Daan, meesha aan anigu joogay waxay ahayd degmada Ibrahim koodbuur ee xaafada xero awr waxa maqlaayay dad ku hataaqaya magaca mooge.
Sidoo kale waxa isaguna ku Haboon guddoonka barlamaanka Mr Faratoon oo ah Nin dhib iyo dheef LA qaybsaday dalkiisa somaliland, guullo badan oo diblimaasiyadeedna kasoo hooyay arrimaha dibada.
Maanta somaliland guulaystay guushana Cid kale may keenin ilaahay kasagoow madaxweyne biixiba sabab u ahaa wanna guulaha biixi ee diwaanka u gashay.
Haddaba waxaan kula talinayaa in moogena maayar laga dhigo Faratoon guddoonka lagu wareejiyo.